Sobobta Ka Dambaysay Weerarkii Lagu Qaaday Gurigii Madaxwaynihii Hore Somaliya Aadan Cade Oo La Shaaciyay Iyo Cidii Ka Dambaysay Weerarkaasi
Somalia: Economic Growth Accelerating to 3.5 Percent in 2019, Says IMF
725,000 people face hunger following drought in Somaliland
Friday, 14 September 2018 11:01
14/09/2018(BNN) The Guardian oo ah Wargeys weyn ayaa qoray maqaal uu kaga hadlayo ciidamo Maraykan iyo Soomaali isugu jiray oo u dhacay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
Wargeyska waxaa uu sheegay in ay dhici karto inay ku socdeen xog sirdoon oo khaldan.
Wuxuu sheegay in ciidankii guriga jabiyey uu la socday ugu yaraan hal qof oo ajnabi ah.
Mid ka mid ah saraakiisha sirdoonka ee Soomaaliya, oo si toos ah wax uga ogaa hawlgalkan ayaa isna sheegay in “”xog sirdoon oo khaldan ay jirtay intaan la qaadin iyo intii uu socday weerarka lagu qaaday guriga madaxweynihii hore”.
Il-wareed ka tirsan xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa wargayska u sheegay “ in bartilmaameedka uusan ahayn guriga madaxweynihii hore, Aadan cabdulle. Kani wuxuu ahaa hawlgal ay qaadeen ciidan gaar ah oo Soomaali ah, waxaana la socday la taliyeyaashooda Ameerikaanka ah. Xoogaggaas waxay daba socdeen xubin ka tirsan koox argagixiso oo u cararay dhinaca guriga madaxweynihii hore, laakin ciidankaas waxay si khaldan u weerareen guriga oo qoyska ay ku nool yihiin” ayuu il-wareedkaas sheegay.
Isla qofkaas wuxuu u sheegay wargayska in ra’iisul wasaare Khayre uu qoyska u sheegay in la baarayo arrinka, dhawaanna la sii deynayo 3 wiil oo dhallinyaro ah oo la kaxaystay.
Gaashaanle Karl Weist oo ah afhayeenka taliska ciidanka Maraykanka ee Afrika ayaa u sheegay wargayska The Guardian in ciidanka Ameerikaanka uu doorkoodu yahay “la talin iyo caawin”, ayna bahwadaag kula yihiin ciidanka Soomaalida sidii loo kala dhantaali lahaa oo loo wiiqi lahaa hawlgallada Al Shabaab ee “Wagaante” oo halkaa u dhow, oo uu ula jeeday deegaanka Waagaade, habeennimadii 4 Siteembar 2018.
“Hawlgalka waxaa lagu bartilmaameedsanayey shabakadda qaraxyada ee Al Shabaab. Ciidanka Maraykanka kaalintooda waa kaalmo kaliya” ayuu yidhi
More in this category: « Farmaajo Waa Geesigii Africa " Manaasibada Lagu Taageerayo Dadaalad Uu Madaxwayne Farmaajo Ka Soo Hooyaya Isbedelada Ka Socda Geeska Africa Oo Ka Dhacday Muqdisho +VIDEO DAAWO: Caruurta Agaamaha Ah Ee Ku Nool Dalka Afganistaan Oo Soo Bandhigay Waxyaabo Soo Jiitay Indhaha Bulshada Iyo Muqaal Yaableh Daawo Waxa Dhacay »